အဆိုပါတောင်တက်ထီး - တရုတ် Hebei Meihua ဟာ့ဒ်ဝဲ mesh
Curvy welded ခြံစည်းရိုး
ပေါက်ကွဲမှု-အထောက်အထား hesco အတားအဆီးကွက်
Active ကို SNS ကာကွယ် Net က
SNS တွေမှာ Passive ကာကွယ်ပိုက်ကွန်ကို
ဆန့်ကျင်တောင်တက် 1 Anti-တက်ပြီး၏ငှက်ဆူးတွေ့ဆုံနိုင်ငံတကာအဆင့်မီထူးခြားချက်များ Spike: ဒါဟာမြို့ရိုးအမှ2အဆိုအရစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်: သံချေးရန်လွယ်ကူလှပပုံပန်းသဏ္ဌာန်, မ, အဆင်းအရောင်အမျိုးမျိုး 3. လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ Anti-တက်ပြီးဆူးလက်သည်းထိရောက်စွာတောင်တက်တားဆီးများနှင့် scaring ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားနိုင်သည့်, တပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်၏မူလတန်းလာကြတယ်နှင့်မှေးကိုဖွဲ့စည်းပြီးလျှင်, သံမဏိ spikes တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြတ်ကူးသည်ကိုကျူးကျော်သူတွေက4အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ် 5. အစွမ်းထက်အဟန့် နှင့် blocki ...
2: သံချေးရန်လွယ်ကူလှပပုံပန်းသဏ္ဌာန်, မ, အဆင်းအရောင်အမျိုးမျိုးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
ကျူးကျော်သူတွေကမှ 5. အစွမ်းထက်အဟန့်
အ Anti-တက်ပြီးဆူးလက်သည်းထိရောက်စွာတောင်တက်တားဆီးများနှင့် scaring ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကစားနိုင်သည့်, တပြင်လုံးကိုသံမဏိပန်းကန်၏မူလတန်းလာကြတယ်နှင့်မှေးကိုဖွဲ့စည်းပြီးလျှင်, သံမဏိ spikes တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြတ်ကူးနေသည် နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်း။
Anti-တောင်တက် Stinger ၏သက်ဆိုင်နယ်ပယ်: လူနေအိမ်နံရံဘဏ်ရုံး, villa အိမ်တော်ကိုတံခါးဝ Anti-တောင်တက်, ထောင်ထဲမှာ, လေဆိပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အထီးကျန်မှုတွေ, စစ်ရေးနှင့်အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူအခြားနေရာများတွင်, etc
ဆူးလက်သည်း Anti-တက်ပြီး၏ 1. မော်ဒယ်
သုံးမော်ဒယ်များ ရရှိနိုင်ပါသည်: ကြီးမားသော, အလတ်စားနှင့်အသေးစား
ဟော့သွပ်ရည်စိမ်စာရွက်, သံမဏိစာရွက်, မျက်နှာပြင်မှုန်ရေမွှား (ပူသွပ်ရည်စိမ်စာရွက်ဟာအသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်)
Anti-တက်ပြီးဆူး၏ 3. ရှည်
အကြီးစားနှင့်အလတ်စားအရွယ်အစားများသောအားဖြင့်တစ်ဦးရှိ 1.25 မီတာနှင့် 1.5 meters.The သေးငယ်တဦးတည်း၏အရှည် 1.2 မီတာရှည်လျားသည်
Anti-တောင်တက် spikes4နံပါတ်
တစ်ခုချင်းစီကိုကို 30 ကိုအပိုင်းပိုင်းတစ်သေတ္တာဖြစ်ပါသည်
specification အထူ အနံ အရှည် thorm ၏အရှည် အဖုံး
အကြီးစား 2MM 1.5MM 5CM 1.25M 1.5 10CM
အလယ်အလတ် 2MM 1.5MM 5CM 1.25M 1.5 10CM 30Pieces / Box ကို
သေးငယ်သော 1MM 4CM 1M 6CM
ပူပြင်းတဲ့ Umbrella တောင်တက်နှစ်ပြီးသော
အားဖြည့် welded ဝါယာကြိုးကွက်
Hebei Meihua ဟာ့ဒ်ဝဲ mesh Co. , Ltd
E-mail ကို: jackliujianke@hotmail.com
E-mail ကို: hardware@mh-wiremesh.com